Cusboonaysiinta COVID-19 - Ururka Daryeelka Bulshada Cusboonaysiinta COVID-19 - Ururka Daryeelka Bulshada
Waxaan soo dhaweyneynaa bukaanada cusub si ay noolala xiriiraan daryeelka caafimaadka qoyska, daryeelka ilkaha, caafimaadka akhlaaqda, ama taageerada bulshada.
Markaan ka soo baxno xilliga fasaxa, waxaan aragnaa tiro aad u badan oo COVID-19 ah oo gudaha ah. Taas macnaheedu waxa weeye waxaan sidoo kale aragnaa dib u dhac ku yimaada natiijooyinka baaritaanka COVID-19, aan ku filneyn baaritaano COVID-19 kuwa raba ama u baahan, iyo su'aalo badan oo badan. Waa kuwan dhowr cusbooneysiin oo kaa caawin kara inaad ka jawaabto welwelka ama su'aalaha aad hadda qabtid inta ay Kooxdayada Daryeelku ka shaqeynayaan inay la socdaan wicitaannada taleefanka:
Haddii aad sugayso natiijada baaritaanka COVID-19Fadlan ha soo wicin oo ha weydiin. Xubin ka tirsan Kooxda Daryeelka ayaa ku ogeysiin doona isla marka natiijadaadu soo baxdo. Inta aad sugayso natiijadaada, fadlan xidho maaskaro oo ka fogow kuwa kale intii suurtogal ah. Haddii aad leedahay akoon bog internet-ka bukaan-socod, natiijooyinka iyo hagitaan ayaa halkaas lagu soo diri doonaa isla marka la helo. Boggaaga bukaan-socodka ayaa ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee lagu helo natiijooyinka baaritaanka.
Haddii aad hayso su'aal gooni-gooni ah ama karantiil, waxaanu ku talinaynaa in dhammaan bukaannada la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin ee laga helay COVID-19 ay go'doomiyaan muddo 10 maalmood ah laga bilaabo maalintii ay astaamuhu bilaabmeen, ilaa uu bixiyahaagu kaala hadlo qorshe kale. Haddii aad la kulanto qof laga helay COVID-19 oo aan lagu tallaalin ama aad sabab u tahay xoojintaada, waxaan kugula talineynaa inaad karantiil ku hayso 5 maalmood laga bilaabo maalinta aad qaawisay.
Haddii aad u malaynayso inaad rabto ama u baahan tahay in lagaa baadho COVID-19, fadlan ogow in hadda aanu kaliya qabanayno ballamaha baaritaanka COVID-19 ee bukaanka Ururka Bulshada ee leh calaamadaha COVID-19. Ma awoodno inaan u ballan-qaadno baaritaannada COVID-19 qof kasta oo aan bukaan-socodka ahayn ee Daryeelka Bulshada Ururka, qof kasta oo uu soo gaaray COVID-19 laakiin aan lahayn astaamo, ku soo laabta shaqada, ku soo laabta dugsiga, ama safarka.
Haddii aad rabto tallaalka COVID-19/xoojiye, waxaanu tallaalaynaa dhammaan carruurta (5+), dhallinyaro, iyo dadka waaweyn - xitaa haddii aanad bukaan ahayn. Moderna, Pfizer, ama Johnson & Johnson tallaalada ayaa diyaar u ah qiyaasaha koowaad, labaad, saddexaad, ama xoojinta, taas oo ku xidhan baahiyahaaga caafimaad.
Si aad u hesho daryeel caafimaad oo degdeg ah ama ilko, wac mid ka mid ah meelahayaga isla maalintaas ama ballamaha maalinta xigta. Walaac caafimaad oo deg deg ah saacadaha kadib, wac mid ka mid ah meelahayaga si aad ula hadasho adeeg bixiyaha heeganka ah. Xaaladda degdegga caafimaadka, garaac 911.